Ny Magy Telo amin'ny findainao miaraka amin'ireto fampiharana ireto | Vaovao iPhone
Saika hamarana ny fetin’ny Krismasy isika, fety izay hifarana amin’ny fomba ofisialy ny 6 janoary izao, rehefa mitsidika trano an-tapitrisany ireo Magy Telo mba handao ny fanomezany. Ny mponina sasany dia niorina fameperana ambony toy izany mba ho afaka hanatrika ireo matso izay, fianakaviana mihoatra ny iray, tsy te handeha.
Raha mipetraka ao amin'ny tanàna iray ianao, izay nofoanana ny fitaingina soavaly noho ny fihanaky ny coronavirus, alohan'ny handiso fanantenana ny zanakao ary tsy hitanao izy ireo, azonao atao ny mampiasa ny fampiharana samihafa hita ao amin'ny App Store mba ahafahan'ny ankizy miresaka sy manao. antso an-tsary miaraka amin'ny Magy, tsy mila mandao ny trano.
Ny zavatra voalohany tokony horaisintsika rehefa mifidy fampiharana iray na hafa dia tsy mifototra amin'ny hevitr'izy ireo ao amin'ny App Store. Tena ratsy ny ankamaroany. Izany dia noho ny fahadisoam-panantenana ny ray aman-dreny nahita fampiharana izay tsy manome kalitao ambany indrindra.
Na izany aza, ny kely, manana sisin-kevitra midadasika kokoa Ary raha toa ka mitovy amin'ny Lehilahy Magy Telo izy ireo, dia mendrika ny fampiharana, indrindra rehefa tsy mbola nanomboka nanatona ny teknolojia toy ny vitan'ny ankizy 7-8 taona izy ireo.
Na izany aza, anao foana ny fanapahan-kevitra farany hisintona sy hametraka ny iray amin'ireo fampiharana ireo. Avy amin'ny Actualidad iPhone dia asehonay aminao ny safidy tsara indrindra azo alaina ao amin'ny App Store, izay tsy dia maro loatra, mba ahafahan'ny ankizy manao izany. antso an-tsary miaraka amin'ny Magy.
Ireo antso video ireo tsy misy afa-tsy ireo horonan-tsary voarakitra azo alaina ao amin'ny rindranasa satria na oviana na oviana izy ireo dia manolotra antsika ny fahafaha-manao manokana ny hafatra amin'ny anaran'ny zanatsika toy ny hoe azontsika atao amin'ny fampiharana sasany an'i Santa Claus, fialantsasatra malaza eran'izao tontolo izao noho ny Mpanjaka Telo.
1 Antso amin'ny vidéo Lehilahy Hendry Telo
2 Video antso miaraka amin'ny Magy
3 Antso amin'ny vidéo Lehilahy Hendry Telo
4 Ny sarinao miaraka amin'ny Magy
5 Taratasy ho an'ny Magy
Antso amin'ny vidéo Lehilahy Hendry Telo
Misaotra ny fampiharana Three Kings Video Call, ho gaga ny zanakao amin'ny antso an-tsary avy amin'ny Mpanjaka Hendry tiany indrindra. Matihanina ireo mpilalao nandrakitra ireo horonan-tsary ireo ary samy manaraka ny script iray ihany izy ireo izay anontaniany ny zandriny indrindra (mazava ho azy fa tsy miandry ny valin-teniny) ny fitondran-tenany nandritra ny taona, inona ny naoty noraisiny, raha manampy tsy tapaka ao an-trano izy ireo. ...
Raha te hitahiry ny fihetsiky ny zanatsika isika dia afaka mampiasa ny fiasa misy amin'ny iOS izay ahafahantsika raketo ny efijery iPhone na iPad raha ny noheverina antso an-tsary, firaketana izay azontsika zaraina amin’ny namana sy ny fianakaviana any aoriana.
Ny fampiharana Three Kings Video Call dia azo alaina ho anao misintona maimaim-poana, misy doka, fa tsy misy fividianana in-app. Mifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod touch izy io ary mila OS 11.2 raha kely indrindra.
Mifanaraka amin'ny Macs ampiasain'ny Apple M1 processeur ary izany dia tantanan'ny macOS 11.0 na aoriana, izay ahafahantsika mankafy ireo antso an-tsary amin'ny haben'ny efijery lehibe kokoa raha tsy manana iPad isika.
Antso amin'ny vidéo Lehilahy Hendry Telomaimaim-poana
Video antso miaraka amin'ny Magy
Miaraka amin'ny fampiharana Videollamadas con Reyes Magos dia manana fahafahana ny zanatsika miresaka amin’ny Magy avy amin'ny iPhone na iPad-ntsika mba hamaliana ireo fanontaniana mahazatra momba ny fitondran-tenany, ny fomba naoty, ny habetsahan'ny fanampiana azy ireo ao an-trano ...
Ny fampiharana Video Calls with Three Wise Men dia azo alaina ho anao misintona maimaim-poana. Mifanaraka amin'ny iPhone sy iPad izy io ary misy fividianana in-app ahafahana mirakitra antso an-tariby, na dia manolotra an'io safidy io aza ny iOS, ka tsy mila mampiasa azy ianao raha tsy tena tianao ilay app ary tianay manohana ny developer.
Video antso miaraka amin'ny Magymaimaim-poana
Ny fampiharana Video Call Three Kings, Ny Magy Telo dia hanao antso an-tsary miaraka amin'ny zanakao mba hanontany azy ireo izay tiany horaisina, raha tena mendrika ny fanomezana izy ireo, ny fitondran-tenany, raha nanampy izy ireo ...
Ny dikan-teny ho an'ny iOS (misy ihany koa ho an'ny Android), izany dia mamela antsika hanao antso video ihany. Raha manan-janaka bebe kokoa izahay dia tsy maintsy mampiasa fampiharana iray hafa asehoy anao amin'ity lahatsoratra ity na mampiasa ny fividianana in-app izay manokatra izany fetra izany.
Azo ampiasaina ity application ity ho anao misintona maimaimpoana ary asio doka. Tsy nohavaozina nandritra ny fotoana kelikely izany, ka miankina amin'ny dikan-iOS an'ny iPhone-nao dia mety tsy mandeha tsara.
VideoCall miaraka amin'ny Magimaimaim-poana
Ny sarinao miaraka amin'ny Magy
Ny sarinao miaraka amin'ny Magy tsy fampiharana hanaovana antso video. Na izany aza, mety tsara ny manamboatra ny sarinao amin'ity vanim-potoana ity miaraka amin'ny Mpanjaka Telo amin'ny endrika sticker. Ity fampiharana ity dia hita ao amin'ny App Store sy Play Store.
Noho ity fampiharana ity dia azonao atao ny maka sary ny efitrano izay, amin'ny fomba nentim-paharazana, ny olon-kendry Telo mamela ny fanomezam-pahasoavana ao an-tranonao, mba ampio amin'ity fampiharana ity izy ireo ary asehoy amin’ny zanakao izany rehefa mifoha izy alohan’ny hahitany ny fanomezana rehetra navelany taminy.
Ny fampiharana Your Photo with the Magi, dia azo alaina ho anao misintona maimaim-poana ary misy fividianana hanesorana ny doka misy ny fampiharana. Mba hametrahana ity fampiharana ity, ny iPhone, iPad na iPod touchy dia tsy maintsy tantanin'ny iOS 9 na ambony.
Raha manana Mac isika dia afaka mametraka ilay rindranasa raha mbola io ihany no mitantana azy Apple M1 processeur sy macOS version 11.0 na aoriana.
Ny sarinao miaraka amin'ny Magymaimaim-poana
Taratasy ho an'ny Magy
Miaraka amin'ny fampiharana Taratasy ho an'ny Magy, ny zanatsika dia afaka soraty ny taratasy ho an’ny Magy Raha mbola tsy nanao izany izy ireo dia mbola tara loatra, na dia tsy hadinon’ny ray aman-dreny aza ny mividy fanomezana betsaka araka izay azo atao.
Rehefa avy namorona ny taratasy ho an’ireo Magy Telo isika dia afaka mizara izany amin’ireo fianakaviana sy namana rehetra ireo raha toa ka kasaina ny fandraisan’izy ireo anjara amin’ny fividianana fanomezana ho an’ny ankizy madinika. Taratasy ho an'ny Magi dia misy ho anao misintona maimaim-poana tanteraka ary misy fividianana in-app hanesorana ny doka rehetra.
Taratasy ho an'ny Magymaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ny Magy Telo amin'ny findainao miaraka amin'ireo fampiharana ireo
Inona no virus kalandrie sy ny fomba hanesorana azy amin'ny iPhone
Apple dia namidy manodidina ny 40 tapitrisa iPhone 13s tamin'ity Krismasy ity